मैंले तिरेको कर के मा खर्च होस्? – Ganesh K Paudel
मैंले तिरेको कर के मा खर्च होस्?
मैंले तिरेको करले नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूले उपचारको नाममा विदेश सयर नगरून्। मैंले तिरेको करले मेरो गाउँको लड्न लागेको विद्यालयको भवन बनोस्। चुहिएको छानो टालियोस्। स्कूलमा पुस्तकालय बनोस्।
कर तिर्न किसान दाजूले कम्तीमा एकदिनको काम माया मार्नुपर्छ। एकदिन रोजमा नजाँदा उनले तिर्ने कर बराबरको रकम घरमा गुमाउनुपर्छ। त्यसले एक हप्ताको उनको परिवारको नूनतेल खर्च नोक्सान हुन्छ।
राज्यले कर लिँदा त्यसको बदलामा आफ्ना नागरिकहरूलाई विभिन्न सेवाहरू दिएको हुन्छ। शान्ति, सुरक्षा दिएको हुन्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका के के हो के के सेवा राज्यले नागरिकलाई दिन्छ।
समाजका अपाङ्ग, बृद्ध, बालबालिका, रोगी तथा विभिन्न क्षेत्रका कमजोर नागरिकका लागि विभिन्न सेवा दिएको हुन्छ। बृद्धाश्रम बनाइदिन्छ, अनाथालय, सार्वजनिक विद्यालयमा छात्राबास, सार्वजनिक पुस्तकालय बनाइदिएको हुन्छ।
बस बिसौनीमा घाम पानीबाट जोगाउनका लागि प्रतीक्षालय बनाइदिन्छ। यात्रुहरूको सुविधाका लागि आश्रम, धर्मशाला बनाइदिन्छ। सार्वजनिक स्थलमा पार्क, विश्रामस्थल, चौतारी, पाटी, पौवा, धारा, इनार बनाएर बालक देखि बृद्ध सम्मका सर्वसाधारणलाई सकेसम्म हरेक किसिमका सेवा पुर्याउँछ।
भएको एउटा देशलाई टुक्र्याएर सत्ताइसवटा रजौटाहरू बनाएर जथाभावी पैसाको फुर्मास गर्दैन।
जनतालाई काम लाग्ने शिक्षा दिन्छ, सीप दिन्छ र त्यो शीप र शिक्षा अनुसारको रोजगारी पनि दिन्छ।
मैंले तिरेको करले कृषकका लागि मल, बीऊ र आधुनिक कृषि औजार किन्नका लागि अनुदान पुगोस्। यी सबै कुरा किन्नका लागि बिचौलिया र दलालको कमीशनमा यो पैसा दुरूपयोग नहोस्।
मैंले तिरेको करको शत प्रतिशत उपयोग होस्। कञ्ची पनि दुरूपयोग नहोस्। दर्जनबाट सय, सय बाट हजार पुर्‍याएर तिनले मच्चाउने बबन्डरका लागि दैनिक तलब, भत्ता र सुविधामा यो पैसा नसकियोस्।
दर्जनौं रजौटामा बाँडेर त्यसमा पनि सयौंको संख्यामा पदको वाँडफाँड गरेर तिनको सेवा सुविधामा यो पसीनाको कमाई नष्ट नगरियोस्।
प्रत्येक जनताबाट असूलेको करको पैसा पैसाको हिसाब राज्यले चुक्ता गरोस्। जवाफदेहिता, दोषीलाई दण्ड र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्थामा खर्च गरोस्। जनचेतना बढाउन खर्च होस्।
Nepal Tax; कर; राजश्व
आधा दिन मात्र खुल्ने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जनताको के सेवा गर्छ?
स्कूलको बार्षिकोत्सव र फुक्न नपाएको बेलुन